ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှူး မခေါ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကလော့ပ် ရှင်းလင်း ၊ တစ်ချိန်တွင် လီဗာပူးသိြု့?? - Yangon Media Group
ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှူး မခေါ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကလော့ပ် ရှင်းလင်း ၊ တစ်ချိန်တွင် လီဗာပူးသိြု့??
လီဗာပူးနည်းပြကလော့ပ်က နွေဈေးကွက်တွင် ပြိုင်ဘက်အသင်းများက ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှူးများ အသီးသီးခေါ်ယူခဲ့ကြသော်လည်း လုံလောက်သောအင်အားရှိထားသည်ဟု မှတ်ယူထားခြင်းကြောင့် မိမိတို့အသင်းအနေဖြင့် ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှူးတစ်ဦး ထပ်မခေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
လီဗာပူးတိုက်စစ်တွင် ကော်တင်ဟို၊ မာ နေး၊ ဖာမီနို၊ ဆာလက် စသည့် ကစားသမား ကောင်းများရှိနေသော်လည်း မန်ယူမှ လူကာကူ၊ ချဲလ်ဆီးမှမိုရာတာနှင့် အာဆင်နယ်မှ လာကာဇက်တီတို့ကဲ့သို့ ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှူးမရှိဘဲ အသက် ၂ဝ အရွယ်သာရှိသေးသည့် ဆိုလန် ကီကိုသာ ခေါ်ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် ကလော့ပ်က ”အသင်းမှာ ကြံ့ခိုင်မှုပြန်ရလာတဲ့ စတာရစ်ခ်ျရှိနေလို့ သူ့ကို ပြန်သုံးနိုင်မှာဖြစ်သလို အင်္ဂလန်ရဲ့လူငယ်တွေ ထဲမှာ အထောင်တိုက်စစ်နေရာမှာ အကောင်း ဆုံးကစားနိုင်တဲ့ ဆိုလန်ကီကိုလည်း ခေါ်ယူ ထားနိုင်ပါတယ်။ မိုရာတာ၊ လူကာကူ၊ ဟယ်ရီကိန်းနဲ့ လာကာဇက်တီတို့က သူတုိ့အသင်း တွေမှာ ခြေစွမ်းပြနေတယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန် တော်တို့လုပ်သင့်တယ်ထင်တာကို လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်အနေအထားအရ ကျွန်တော်တို့အသင်းက လူကာကူကိုခေါ်ယူ နိုင်မယ့် အခြေအနေမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ အခု လက်ရှိမှာ ထင်သလောက်ဂိုးမရလို့ဆိုပြီး ကစားသမားသစ်တွေ ထပ်ခေါ်နေစရာမလိုပါ ဘူး။ အသင်းအနေနဲ့ ဂိုးရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေး တွေကို အလုံအလောက်ရခဲ့တာပဲဖြစ်လို့ ဂိုး တွေပြန်လည်သွင်း ယူလာနိုင်မှာသေချာပါ တယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
လီဗာပူးသည် ၂ဝ၁၃-၁၄ ဘောလုံးရာသီက ဆွာရက်ဇ်(၃၁)၊ စတာရစ်ခ်ျ(၂၁)တို့ နောက်ပိုင်းတစ်ရာသီအတွင်း လိဂ်ဂိုး ၂ဝ သွင်း ယူနိုင်ခဲ့သောကစားသမားမရှိခဲ့ဘဲ ယခုနှစ် ရာသီတွင်လည်း အထောင်တိုက်စစ်မှူးများက ဂိုးများသွင်းယူနိုင်ရန် ရုန်းကန်နေရခြင်းဖြစ် သည်။ ဆက်စပ်သတင်းအရ လီဗာပူးနှင့်ရင် ဆိုင်ကစားရမည့် နယူးကာဆယ်အသင်းမှ နည်းပြဘင်နီတက်ဇ်က တစ်ချိန်တွင် အသင်း ဟောင်းလီဗာပူးသို့ တစ်ကျော့ပြန်ရောက်လာ နိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ငြင်းဆန်ခြင်းမပြုနိုင် ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဘင်နီတက်ဇ်သည် ၂ဝဝ၄မှ ၂ဝ၁ဝအထိ လီဗာပူးနည်းပြအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် နယူးကာဆယ်၌ ပျော်ရွှင်လျက်ရှိ သော်လည်း မိမိနှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံ ရေးရှိထားသော လီဗာပူးသို့ တစ်ချိန်တွင်ပြန်လည် သွားရောက်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကြိုးတံတား၏ ခံနိုင်ဝန်ကိုထိခိုက်စေမည့် တံတားပေါ် ယာဉ်များရပ်တန့်ပိတ်ဆို့မှု ရှင်းလင်းပေးေ??
ထရန့်က မီဒီယာများအား အသစ်ထပ်မံ တိုက်ခိုက်
ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရန် နွားဝယ်ယူမှု များပြားလာသည့် အတွက် ကလေးမြို့၌ တောင်သူသုံး ခိုင်းနွားမျ?
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေဘွဲ့ရသူများအသင်း ဖွဲ့စည်းရန် ဆွေးနွေး